Mugadziri akakurisa emafuta emuorivhi uye mafuta akanakisa pasirese | Ehupfumi Zvemari
Akakura kwazvo mugadziri wemafuta emuorivhi
Susana Maria Urbano Mateos | | makambani, Noticias
Mafuta omuorivhi ndarama yegungwa reMediterranean, chikamu chekudya kwedu kwemazuva ese, uye isu hatibate chero chikafu chisina mafuta emuorivhi. Unogona here kufungidzira tumaca chingwa chisina mafuta omuorivhi? Kana iwe kana chero munhu.
Uye mashandisiro ayo haasisiri ega kuMediterranean basin, iine maItari, maGreek neFrance hama, asi mashandisirwo ayo ave zvishoma nezvishoma ave epasirese, uye mukati nyika dzisiri chikamu chekudya kwavo, yatove chikamu chayo.
Zviripachena, kana yako kunwa kunowedzera, zvakare inowedzera kukosha kwekugadzira mafuta omuorivhi 'in situ', ichidzivirira kupinza huwandu hwakawanda hwemafuta emuorivhi kune, semuenzaniso, Italy, mutengesi mukuru wepasi rose wemafuta omuorivhi.
Kushandiswa kwave kuri kuwedzera nekuda kweshanduko mukudya kwemamirioni avanhu, vanotsvaga chikafu chine hutano, uye iyo mafuta omuorivhi anopa akawanda mabhenefiti ehutano, zvinopesana nechanza, coconut kana mafuta akacheneswa, ayo anodyiwa munyika zhinji dzepasi.
Izvi zvinotitungamira kumubvunzo:
0.1 Ndeupi mugadziri mukuru wemafuta emuorivhi pasirese?
1 1.- Spain
1.1 2.- Italy
1.2 3.— Greece
1.3 4.- Turkey
1.4 5. - Tunisia
1.5 6.- Portugal
1.6 7.- Siriya
1.7 Nyika dzinogadzira mafuta emuorivhi akanakisa pasirese
Ndeupi mugadziri mukuru wemafuta emuorivhi pasirese?
Zvakaoma kutaura, nekuti senge zvese zvimwe zvinhu, kune nyika dzakasiyana dzinotungamira muminda dzakasiyana, uye zvakanaka kuti uzive panorama yeavo vanogadzira, kutumira kunze uye kudya zvakanyanya.
Chinyorwa ichi kuongorora kuti mugadziri mukuru wemafuta emuorivhi pasirese.
Nekudaro iwe une zano rezvikamu: pakati pa2015 uye kusvika parizvino gore rino, kutenderera mamirioni 2.6 matani emafuta emuorivhi akatodyiwa mupasi rose.
Zvinogona kusakushamisa iwe kuti Spain ndiyo inogadzira mafuta omuorivhi mukurusa pasirese. Inogadzira 45% yemafuta emuorivhi anodyiwa pasi rese; huwandu hunoshamisa.
Iyo nzvimbo inoshandiswa ndeye mamirioni mashanu maeka emiti yemiorivhi.
Dambudziko kuSpain nderekuti zhinji yacho inotumirwa kuItari, iyo nyika inoibata, uye kuendesa kunze nemhando yepamusoro kupfuura mafuta eSpain. Italy, zvakare, inoitengesazve kune nyika dzakatenderedza pasirese.
Kunyangwe paine huwandu hwakawanda hwemafuta emuorivhi ayo nyika yedu inogadzira, zvinofungidzirwa kuti chete 20% ndiyo imwe mhandara mafuta.
Nechikonzero ichocho, Spain ine zita renyika huru yemafuta emuorivhi inoburitsa pasirese, asi kwete yakanyanya kunaka.
77% yemafuta emuorivhi anogadzirwa neSpain anobva kuAndalusiaKunyangwe paine kugadzirwa kukuru, Spain inopinza huwandu hwakawanda hwemafuta emuorivhi.
Italy inogadzira 25% yemafuta emuorivhi iyo inoshandiswa munyika, uye kusiyana neSpain, ine mukurumbira kana zita, rekugadzira mafuta emuorivhi akanakisa pasirese.
Hunhu hukuru hwemafuta eItari emuorivhi ndeyekuti ine akasiyana siyana ezvinonhuwira uye masitaera, ayo, semuenzaniso, nyika yedu haina. Inofungidzirwa kuti Italy ine mune yayo gastronomy, mazana manomwe akasiyana emafuta emuorivhi.
Kunyangwe hazvo Italy ichiburitsa hafu yemafuta emuorivhi seSpain, ndiyo inotengesa mafuta omuorivhi mukurusa pasirese, nekuti inounza huwandu hwakawanda hwemafuta kubva kune dzimwe nyika dzakaita seSpain, kunyanya, neGirisi, uye inovabata kuti vavape imwe zvakasiyana, uye wozozvitengesa kunze.
Izvi zvinoita kuti Italy ive mutengesi muhombe, zvakare yemafuta emuorivhi, munyika.
Iyo huru chinzvimbo inogona kusakushamisa iwe, asi iwo nuances anoita kuti zvisiyane. Greece inogadzira ingangoita 20% yemafuta emuorivhi iyo inopedzwa mupasi rose, ichikwikwidza padhuze neItari.
Semhedzisiro yedambudziko rakaoma rezvehupfumi nezvematongerwo enyika riri kurova nyika, vanhu vazhinji vakaona kuti mafuta omuorivhi echiGreek akakosha, nekuda kwezvikonzero zviviri:
70% yemafuta emuorivhi anogadzirwa neGirisi ndeyemhandara yemafuta, inodarika chero nyika yemafuta emuorivhi inoburitsa pasi
Greece ndiyo nyika inoshandisa mafuta emuorivhi akawanda kwazvo pasi, nekuda kwekudya kwayo uye tsika yemireniyamu
Kugadzirwa kwaro kwakatemerwa mumamirioni matatu maeka, nemakambani angangoita zviuru zvitatu akazvipira kugadzirwa kwemafuta emuorivhi, achiburitsa zana dzakasiyana siyana dzegoridhe reMediterranean.
Oiri yemiorivhi inotaurwa naHomer: kushandiswa kwayo ndeye ngano.
Turkey ndeimwe nyika ine tsika yemireniyoni mukudyiwa uye kugadzirwa kwemafuta emuorivhi. Kugadzirwa kwayo kunoiswa munzvimbo yakatenderedza Gungwa reAegean.
Nzvimbo yayo ine hungwaru pakati peEurope, Asia neAfrica yakaibvumidza kuti igadzire musika wekubatana pakati penyika pamakondinendi matatu, ichiita kuti ive imwe yevanogadzira mafuta emuorivhi makuru pasi rose.
Huwandu hwemiti yemiorivhi muTurkey inofungidzirwa kuti yakapetwa katatu kupfuura huwandu hwayo hwese. Sekureva kweWorld Bank, muna 2013, vanhu zviuru makumi manomwe nezvina. Iko kune mazana maviri nemakumi mashanu emiti yemiorivhi muTurkey yose.
Kune akawanda marudzi e maorivhi muTurkey, asi chakanyanya kukosheswa ndecheiyo inogadzirwa munzvimbo yeAyvalik, pamhenderekedzo dzeGungwa reAegean; kunaka kwayo kwakanyanya kufanana nemafuta emuorivhi anogadzirwa muItaly Tuscany.
5. - Tunisia
Tunisia, zvisinei nechirango chayakatambira kubva kumagandanga, yakapihwa daesh uye zvisati zvaitika, nekuda kweiyo 'Arab chitubu', inoramba ichikura uye ichienderera ichipa chinyorwa.
Vamwe vanomupa chinzvimbo chechina, uye mamiriro ake chinhu chakati. Ngatione.
KuTunisia, mafuta omuorivhi anomiririra makumi mana muzana ezvekutengesa kunze kwenyika kwenyika yese, uye kutumira huwandu hwakawanda kune nyika dzakaita seUnited States, uye kunyangwe zvese, Italy neSpain.
Muchokwadi, mu2015, yaive mutungamiri wepasi rose mukutengesa mafuta omuorivhi, ichidarika Italy neSpain. Nyika idzi dzakatambura goho rakaipisisa mumakore nekuda kwekushata kwemamiriro ekunze uye infestations.
Dambudziko nderekuti Spain neItari zvakatengwa kunze kwenyika, asi mafuta emuorivhi akaiswa mumabhodhoro seayo uye Tunisia haina kuzivikanwa semugadziri wemafuta akadaro, chimwe chinhu chinoitika kuSpain nemafuta ayo aanotumira kuItari.
Gore iro, oiri inotumirwa kuSpain yakapetwa kaviri, uye iyo inotumirwa kuItari katatu.
Naizvozvo, zvakatanga mukati Tunisia mushandirapamwe wekubhotera mafuta munyika yako, uye kuti vane zita rekuti 'Yakagadzirwa muTunisia' (Yakagadzirwa muTunisia).
Nyika yedu yakavakidzana zvakare ndeimwe yevanogadzira maorivhi makuru, uye kunyangwe yanga iri nyajambwa wekuregeredzwa, iri kupora zvishoma nezvishoma. Pamwe chete neTurkey neGirisi, maorivhi muPortugal ndeyekare: Kugadzirwa kwayo kwakatangira panguva dzehushe hweRoma, kugara kwevaArabhu uye nenguva dzazvino. Kupfuura 50% yekugadzirwa kwayo imhandara yemafuta emuorivhi yemhando yepamusoro.
Siriya iri kusangana nenguva inotyisa, hondo yevagari vemo pamativi mana kana mashanu yakarova nyika, kubva kwazvinofungidzirwa kuti, maorivhi akaberekwa. Zvinogona kunge zvisiri ngano, zvakanaka rudzi rwekutanga rwemuti wemuorivhi, rwakawanikwa muSyria, neyakaitika makore zviuru zvitanhatu, ichipararira muSyria yose kusvika inosvika kugungwa reMediterranean. Kusvikira panguva iyo hondo yakatanga, Siria yaigadzira 165.000 matani emafuta omuorivhi pagore. Ndinovimba zvinhu zvese zvinodzokera kune zvakajairika imomo nekukurumidza sezvazvinogona.
Nyika dzinogadzira mafuta emuorivhi akanakisa pasirese
Isu takaona izvo kunyangwe Spain ndiyo nyika inoburitsa zvakanyanyaHaisi iyo inotengesa kunze zvakanyanya, kana iyo inogadzira mafuta akachena kwazvo pasi. Zvino, kuti uone kuti ndeipi mafuta akanyanya kunaka pasirese, pakave nemakwikwi, uye ichangoburwa uye yakakosha yaive pakutanga kwegore rino muNew York, uko mhando yemiorivhi, nguva yekukohwa, kana dzinoongororwa uko kwavanoti ndiko, mwero wekuchena, nezvimwe.
Sekuziva kwatinoita kuti waini yakanakisa iripi, tinoedza kutsvaga kuti mafuta arinani pasi rose aripi. Aya ndiwo maranho emakwikwi aya:
5.- United States
VaSpain vakaunza miti yemiorivhi kune yainzi New Spain, yava kunzi Mexico, pavakakomberedza America. Maodzanyemba eUnited States, kunyanya California, ndiyo inogadzira mafuta omuorivhi mukurusa munyika iyoyo, yaimbove ndima yeMexico.
Ndiyo nyika yatinoshamwaridzana nayo nemafuta emuorivhi, nekuda kwemanovels aHomer uye echiGiriki ngano, uyezve, nekuti iri chikamu chegastronomy, hama dzeMediterranean, mushure mezvose.
Pamafuta emaorivhi 168, 19 aive nemenduru yegoridhe, uye nesirivha gumi nematanhatu.
Mumakwikwi aya, vavakidzani vechiPutukezi vakawana menduru dzegoridhe gumi neshanu nemenduru dzesirivha nhanhatu, uye gumi nemaviri emarudzi avo emafuta ari pakati pemafuta akanakisa egore ra15 nemasangano akasarudzika akasiyana.
Itari, pamwe neSpain, Turkey neGirisi vane tsika refu yekugadzirwa kwemafuta emuorivhi nekudyiwa. Mafuta eItari, makumi mana nemapfumbamwe, akahwina mibairo makumi mana nematatu. 99 avo vane chinyorwa 'chakanakisa', uye vamwe vese, menduru dzegoridhe.
Ehe, nyika yedu zvakare ine mafuta akanakisa pasirese, uye 136 mabhodhoro akaenda kumakwikwi, 73 vakapihwa mibairo: 3 'akanakisa' mavara, mamenduru 53 egoridhe uye 17 sirivheri, ndokuti, 54% yemafuta eSpain akapihwa.
Zvakare iyo Spanish organic mafuta omuorivhi akahwina mumakwikwi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Noticias » Akakura kwazvo mugadziri wemafuta emuorivhi
Ndakanamata mafuta eSyria omuorivhi kubva kuna Doly, asi handichaiwani zvakare….
Kuva mukuwana mari, kutengesa kana kumirira?
Ivhareji yakaderera kana yepamusoro, inobatsira here pamusika wemasheya?